Archive du 05/04/2012
Didin�ny be sandry
Maro an�isa eny amin�ny Kongresy (CT) sy ny Filankevitra ambonin�ny tetezamita (CST) ny olon�ny antoko TGV sy ny UDR-C manohana an�i Andry Rajoelina, koa azo antoka fa hampiasa ny heriny sy izay hamaroan'isa izay izy ireo amin�ny adihevitra momba ny famotsoran-keloka sy ny fandaniana azy.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Fiaraha-mitantana ny tetezamita
Tonga eo amin�ny tsotsorimamba isarahana
Anio no hamantarana na hiala tanteraka na tsia ao anatin�izao tetezamita izao ny ankolafy Ravalomanana, araka ny fanazavan�ny mpikambana eo anivon�ny Filankevitra ambonin�ny tetezamita, Leriva Manahirana.
Misy mandika vilana ny Didim-pitsarana
Iniana afafy an-gazety sy etsy sy eroa mba hiteraka fifangaroan-kevitra sy fitohizan�ny fanalam-baraka ny mikasika ny didim-pitsarana momba ny �raharaha BANI� nivoaka ny 21 martsa 2012 teo, taorian�ny Fitsarana ady heloka bevava nanomboka ny 19 martsa 2012.
Jeneraly Ramananarivo Claude
Maty nisy namono niaraka tamin�ny vadiny sy ny zanany vavy
Hita nivalampatra tao amin�ny trano fonenan�izy ireo teny Andohan�i Mandroseza omaly maraina ny vatana mangatsiakan�ny jeneraly Ramananarivo Claude sy ny vadiny ary tovovavy iray, 16 taona, taizan�izy ireo.
Nampahafantarina ofisialy ireo mpikambana vao notendrena
Naseho ho fantatr�ireo namany ireo mpikambana efatra vao notendrena ho ao amin�ny Kongresin�ny tetezamita hisolo ny sasantsasany teo aloha.
�Tsy ampy traikefa ny minisitry ny fitaterana�
Atahorana ny hikatsoan�ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo Renivohitra amin�ity andro alakamisy ity.
Hisy fametraham-pialana faobe raha �
Anio izany ry Jean no hamantarana na hiverina aminareo samirery indray ny fitantanana ity firenena ity na hijanona hoe mbola iarahana amin�ny ankolafy hafa.
Tsy mbola tafavoaka ny ala
Fivoriana iray goavana no hitranga eny Mahazoarivo anio satria dia hihaona voalohany amin�ny praiminisitra ireo mpiara-miasa ara-teknika sy mamatsy vola antsika, miaraka amin�ireo masoivoho vahiny sy fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa eto Madagasikara.